Njalo insizwa okungenani kanye empilweni ukukhetha isipho intombazane, limelela kahle ukuthi kunzima kangakanani. Ukukhetha isipho sangempela ehloniphekile, engavamile futhi emuhle, udinga ukusebenza kanzima, ukuhlola ubunjalo eyodwa ekhethiwe, ukwenza izinto zokuchitha isizungu wakhe futhi imikhuba. Singathini, ngisho amadoda abaye baphila emshadweni nomkakhe othandekayo kuka eminyakeni kweshumi, ayoba mancane amathuba okwenza kube kuka ungakwazi kusimangaze oshade naye. Ngakho-ke, ukusiza amadoda ukuvula ku-intanethi, lapho bebehlala khona: eyayigcwele iseluleko silly, unikeze izixhumanisi ezitolo izipho engavamile, futhi uqiniseke ukuthi "umngane yentombazane best -. Kungcono amadayimane" Cha, angiyi nganoma iyiphi indlela inciphe ukubaluleka amadayimane kanye nezinye amagugu empilweni salowo nalowo muntu wesifazane, kodwa kholwa yimi, sonke sifuna into yokuqala ngempela, zikhethwe incazelo kanye umphefumulo, futhi amadayimane ... Diamonds ulinde.
Omunye njalo kunazo wabuza imibuzo on izinjini - okunganikeza usuku lokuzalwa kwentombazane? Impendulo yalo itholakala kakhulu intombazane. Ukuze uqale, cabangela ubudala wakhe (abasha intokazi, owesifazane osemusha noma lady eminyakeni), bese ukuthola amagama ayo izintshisekelo. Lokhu kuyinto kahle kulula, kulula ngisho kuka kubonakala efika kuqala. Yena uthanda ukufunda, umpheki, nesithakazelo fashion noma umculo, ekhathazeka ngokweqile ngokubukeka doggies noma imibala? Kanti anizazeli yini ukuthi impendulo yalo mbuzo, futhi uma kungenjalo, njalo indlela yokuphunyurha, kodwa ngakho kamuva. Ngakho ukuthi ongasinika lokuzalwa wentombazane?
Rule 1: ukunikeza lokho ncamashi like it. Cabanga impendulo yayo ekwamukelweni samanje, ukusabela kufanele kube njengoba ngokomzwelo futhi bajabule.
Rule 2: Akunakusetshenziswa musa skimp on sipho! Ayikho intombazane uzongithanda ungoqo, kanye ungoqo. Bonisa wakhe nomusa wenu, bonisa imizwa. Wayefuna izicathulo ezintsha? Mayibe ngeyakho wena ngazimbili eziyishumi! Wayefuna ukuqopha umculi oyintandokazi yakho? Yimikise ekhonsathini! Yiba crazy obubonakala ngendlela, futhi luyonqotshwa!
Rule 3: Izimbali - akulona isipho. A bamphathele nezimbali kumane nje kuyingxenye yomthwalo isipho, like ikhadi noma ibhodlela lewayini. Believe me, indoda, zifana noqwembe ukunakwa siyamjabulisa izintokazi, kodwa isipho babengakukholelwa.
Rule 4: isipho yasekuqaleni umngane, ungakhetha, cela kuye. Yebo, akusiwona scary, futhi uma ngempela nobunokwethembana, uma akubonakali ngqo, ngokuqinisekile ke isu ukuthi ufuna ukuba uthole ku Lokuzalwa
Rule 5: Unganikeli into kuyoba usizo ekuphileni kwakhe kwansuku zonke. Ngokuyinhloko, lo mthetho osebenza kubayeni kwezomnotho efuna Ubuningi bamahora ukumphakamisa ikhaya lakhe futhi waphinda londoloza. Futhi uma ungazange wafunda kokubusa 2, amadoda abathandekayo ngalesosikhathi phinde waphinda: ku izipho abathandekayo, asilondolozi! Izimbiza, amahalavu akunakwenzeka ukujabulisa.
Rule 6: ukumenza lokuzalwa okhumbuleka! Impendulo yombuzo ukuthi ongasinika lokuzalwa wentombazane, akukwazi isipho impahla. Izikhangibavakashi elalibhalwe lesi siqhingi, uhambo ezintabeni, gxuma parachute, ahambe phezu yacht - ke liphinde libe yisipho noma ingxenye yalo. Nikeza ozithandayo inganekwane zakho, okuyinto yena uzokhumbula eminyakeni 10.
Ngakho, lezi amathiphu ezilula kodwa eziphumelelayo futhi kungase kutholakale kuwe namanje abazi ukuthi ungayinika usuku lokuzalwa kwentombazane? Kulokhu, i-course ithatha "uhlelo imfihlo" yethu - okungukuthi amadayimane. Yebo, kungcono Corny, kungcono esivikelekile, inikeza konke, kodwa kuyasiza! Futhi uma uke ungavezi isipho yasekuqaleni, nika umhlobiso othandekayo. Indaba amadayimane, ngeyamarubi kanye Swarovski zinhlayiya, kuba okubaluleke, sihle nenhle. Imihlobiso okwethulwa inkumbulo, futhi lutho ungcono amagugu, ayiwavikeli amandla abantu. Futhi isipho esihle kunazo zonke kowesifazane - uchungechunge othandekayo ukuthi ungenza ukumangala okukhulu hhayi kuphela usuku lokuzalwa, kodwa futhi kunoma iyiphi usuku lwesonto, kungakhathaliseki ukuthi isimo kanye nesikhathi sonyaka.
I-Taganrog Cafe: Sibutsetelo
Kata Sea Breeze kuyona 4 * Phuket: ukubuyekezwa, incazelo ihhotela
Amazing hambo e Bali
Yini ehlukile ngemenyu yezinsuku zebhizinisi ezivela ezidlweni ezivamile?